Ciidamo Itoobiyaan Ah oo Lagu Weeraray Duleedka Degmada Garbahaarey.
Sunday July 02, 2017 - 09:08:52 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dhaca Koonfur galbeed dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in weerar culus lagu qaaday kolonyo ciidamo Itoobiyaan ah oo ku socdaalayay duleedka magaalada Garbahaareey.
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada SHM ayaa weerar dhabagal ah u dhigay kolonyo katirsan melleteriga Itoobiya oo ka amba baxay magaalada caasimadda u ah gobolka Gedo kunasii jeeday degmada Buurdhuubo.
Weerarka oo isku bedelay dagaal muddo saacada ah socday ayaa ciidamada Xabashida Itoobiya ku qasbay in ay ku hakadaan halkii lagu weeraray waxaana usuutagali waysay in ay sii wataan socodkooda ku wajahan dhanka degmada Buurdhuubo.
Kumanaan Askari Amxaaro ah oo ku go’doonsan magaalada Buurdhuubo ayaa wajahaya xaalad adag, ilo wareedyo ayaa sheegaya in taliska ciidanka Itoobiya ee Gedo uu amar ku bixiyay in si waba oo suurtagal ah sahay lagu gaarsiiyo ciidamada ku sugan Buurdhuubo arrinkaas oo Itoobiyaanka Garbahaarey ku sugan ku riixay in ay sahay uqaadaan Buurdhuubo.
Miinooyinka waddooyinka lagu aaso iyo weerarada dhabagalka ah ee loo dhigo ciidamada cadawga ayaa wiiqday isaga kala gooshidda magaalooyin gacanta gumeysiga galay oo dhaca Koonfurta iyo Bartamaha dalka Soomaaliya.
Al Shabaab ayaa ku dhowaad 100-kun oo Askar Afrikaan ah kula dagaallamaysa dalka Soomaaliya waxayna xarakadu sanadadii lasoo dhaafay dib usoo ceshanaysay magaalooyin iyo degmooyin istiraatiiji ah.